Android HD Games Collection (apk + SD Data) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)
HTC Incrediable S v4.0.4 ကို Root နည်း Eye Color Changer Pro v1.2.8 APK 2MB Internet Download Manager 6.16 Next Launcher Widgets & Live Wallpapers ExtremeCopy v2.3.2 Pro For Pc 7MB X64 & X32 Home
Published On: Sun, Feb 24th, 2013 Android OS game များ | By သက်နိုင်စိုး Android HD Games Collection (apk + SD Data)
Myanmar Mobile App မှ Android ဖုန်း/Tablet ပိုင်၇ှင်တွေအတွက် Android HD Game အလန်းစားတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကဏ္ဍမှာ HD Game အသစ်တွေအမြဲတင်ပေးသွားမှာပါ။ အောက်မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ HD game ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ (download လုပ်ပြီးလို့ file password တောင်းလာခဲ့ရင် zs0mby ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။)
Last Update at 25.2.2013
Alien and Predator ဇာတ်ကားကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင် AVP: Evolution ဂိမ်းကိုသိကြမှာပါ။ Alien and Predator ဇာတ်ကားထဲကဇာတ်ကောင်တွေပါဝင်တဲ့ action game ပါ။ အခု Android ဖုန်းတွေအတွက် AVP:Evolution အမည်နဲ့ဂိမ်းထွက်ရှိလို့လာပါပြီ ။ ဂြိုလ်သားတွေနဲ့အပစ်အခတ်အသတ်အပုတ် တော်တော်ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Google Play ရဲ့ download ရယူမှုဂိမ်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးစာရင်းဝင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Apk ဖိုင်ရော data file ရောတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ AVP:Evolution v1.0.1 for Android ဂိမ်းကိုအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
SD Data ကို SD Card ထဲက Android/Obb ဖိုင်အောက်မှာထည့်ပါ။ Obb ဖိုင်မပါရင် Obb နာမည်နဲ့ SD Card ထဲက Android ဖိုဒါအောက်မှာဆောက်လိုက်ပါ။
Part 1- http://adf.ly/GGS09
Part 2- http://adf.ly/GGSHH
Part 3- http://adf.ly/GGSAD
Install apk and place data folder in SD Card /Android/Data and play.
Download The Amazing Spider-Man v1.1.7 Apk for Android SD DATA : Download The Amazing Spider-Man v1.1.7 Data 1. Copy ‘gameloft‘ folder to ‘sdcard/‘ (Root of sdcard)
3. Launch game (online for 1st) and Enjoy..!!
Copy patch 1120 obb file to ‘sdcard/Android/obb/com.gameloft.android.ANMP.GloftKRHM’ folder
Download Asphalt 7: Heat v1.0.4 APK for Android DATA :
Download Asphalt 7: Heat v1.0.4 Data for Android Obb patch :
Download Asphalt 7: Heat v1.0.4 Obb patch for Android
Install the APK ..
Copy ‘com.gameloft.android.ANMP.GloftA7HM‘ folder to ‘sdcard/Android/Obb/‘
Copy Patch files to “sdcard/Android/Obb/com.gameloft.android.ANMP.GloftA7HM“
Smurfs’ Village (Unlimited Gold Coins Cheat) v1.2.7a
Man of Steel (Unlimited Money) (for All device) !!!
modern combat2black pegasus v1.27 full apk+data 250MB
Governor of Poker2Premium v1.0.0 Apk Game 50MB
55 comments on “Android HD Games Collection (apk + SD Data)”	ကိုကျော် on February 24, 2013 at 1:21 pm said:
Thanks for many games apk+data. But I want to know how to insert data file into sd card after installation.
Reply ↓	fatty on February 24, 2013 at 4:03 pm said:
sd data ဖြေနည်းလေးပြောပြပေးပါလား ခင်ဗျ
Reply ↓	fatty on February 24, 2013 at 4:05 pm said:
Reply ↓	©4 on February 24, 2013 at 5:01 pm said:
Reply ↓	shound on February 25, 2013 at 1:21 am said:
fatty>>sd data တွေကို တွဲနှိပ်ပြီးတော့ ဖြေလိုက်ပါ်
Reply ↓	mhh on February 25, 2013 at 7:26 am said:
Reply ↓	braineater on February 25, 2013 at 7:31 am said:
apk file ko phone htae hmar install lote pee hma data file ko phone naet download pyan swal loet ya m lar . please ?
Reply ↓	braineater on February 25, 2013 at 7:39 am said:
PES 2013 link lay pyan tin pay loet ya yin pyan tin pay per ownako ,ayan play chin loet per Reply ↓	lynnlay on February 25, 2013 at 8:43 am said:
Iphone 4s မှာ game install လုပ်ရင် Fail ဖြစ်နေလို့ပါ
Reply ↓	nyi htet on February 25, 2013 at 10:19 am said:
pes 13 apk & sd data link ပြန်ပြင်ပေးကြပါဦး
Reply ↓	So Pyay on February 25, 2013 at 11:16 am said:
link တွေက အရမ်းအပျက်တွေများနေတယ် drop box ကနေ ဖြစ်ဖြစ်ပြန်တင်ပေးကြပါဦး
Reply ↓	peta on February 25, 2013 at 1:18 pm said:
thank you but don’t haveafull complement???Please help this problemsssssssss
Reply ↓	yebone on February 25, 2013 at 6:24 pm said:
တစ်ခု Down မရပါ
Reply ↓	Wai Yan on March 10, 2013 at 4:00 am said:
Reply ↓	kohtet on February 26, 2013 at 6:35 am said:
COUNTER STRIKE GAME ပြန်တင်ပေးပါအကိုတို့ ရေ
Reply ↓	Zayar(student) on February 26, 2013 at 6:45 am said:
Reply ↓	pes 2013 ဒေါင်လို့မရဘူး on February 26, 2013 at 7:58 am said:
အကို pes 2013 ဂိန်းကို ဒေါင်းလိုက်ရင် pes 2012 ဂိန်းပဲဝင်လာတယ် ကစားလို့လဲမရဘူး အကို ကူညီပါ ဗျ pes 2013 ဂိန်းကို လိုချင်နေတာကြာပြီ အကို
Reply ↓	anonymous on March 1, 2013 at 4:25 am said:
pes2013 game mobile phone အတွက် မထွက်သေးပါဘူး bro. ကျွန်တော်လည်း 2013 game ဆော့ချင်နေပြီ။
Reply ↓	nyi htet on February 26, 2013 at 11:31 am said:
PES 13 data ကိုအခြားလင့်ကနေ တင်ပေးပါလား…….အရမ်းဆော့ချင်နေလို့
Reply ↓	payesone on March 3, 2013 at 5:40 am said:
Reply ↓	thurainmin on February 26, 2013 at 4:21 pm said:
Do you know this website You have to use his upload site.If you don’t you will be deleted by privacy.(http://free4phones.blogspot.com/search/label/hot%20games)
Reply ↓	aungzaymyo on February 27, 2013 at 11:11 am said:
real football 2012 linkပြန်တင်ပေးပါလား အစ်ကို down မရလို့ပါ
Reply ↓	စိုးလေး on February 27, 2013 at 1:25 pm said:
i love & like …www.myanmarmobileapp.com
Reply ↓	စိုးလေး on February 27, 2013 at 1:28 pm said:
I LOVE & LIKE *http://www.myanmarmobileapp.com*
Reply ↓	အာကာ on February 28, 2013 at 6:24 am said:
Link တွေက down လိုမရ့ဘူး
PES 2013 ကလဲ intall လုပ်လိုက်တော့ PES2012ဖြစ်နေတယ်
Reply ↓	sd data တွေကိုဘယ်နားသွားထားရမှာလဲ on February 28, 2013 at 7:32 am said:
Reply ↓	kyi khine on February 28, 2013 at 10:56 am said:
Reply ↓	ptk on March 1, 2013 at 4:21 am said:
Asphalt7Data File ကို၂ပိုင်း ခွဲပေးပါလားခင်ဗျ
800MB ထက်ပိုပြီး download လုပ်လို့မရလို့ပါ
Reply ↓	anonymous on March 1, 2013 at 6:25 am said:
http://free4phones.blogspot.com/2012/07/android-asphalt-7-hd-heat-v10-by.html ကိုဝင်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ bro
Reply ↓	Cipher on March 1, 2013 at 5:38 am said:
Football Manager Handheld 2013 – v4.0.1 APK + Data Files
လိုချင်လို့ပါဗျာ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် mediafire link နဲ့ပြန်တင်ပေးပါဗျာ
Reply ↓	Paing Lay on March 1, 2013 at 5:46 am said:
အကိုဒီ Gamecollection(apk+SD Data)ကိုအပြင်မှာဝယ်လို့ရလား Down ရတာ connection နဲ့ အဆင်သိပ်မပြေလို့
Reply ↓	anonymous on March 1, 2013 at 6:42 am said:
http://free4phones.blogspot.com/?m=1ကိုဝင်ပြီး downကြည့်ပါ broတို့
Reply ↓	Lucas on March 1, 2013 at 10:06 am said:
spiderman down ဖို့သွားတဲ့ခါ unlock တွေတောင်းတယ် register လုပ်ဖို့လဲပြောတယ် လုပ်ပြီးလည်uးnlock code မရဘူးဖြစ်နေတယ် ကူညီပါဦး
Reply ↓	phyolay on March 7, 2013 at 11:36 am said:
Reply ↓	Han Win Htet on March 1, 2013 at 10:33 am said:
အစ်ကိုတို့ Altairs Chronicles HD v1.0.0 က download လုပ်လို့မရဘူးဗျ data file ကရတယ်
Reply ↓	Tawtharlay on March 1, 2013 at 3:27 pm said:
Myanmarmobileapp.com ခင်ဗျာ Free4phones.blogspot.com ကိုကျွန်တော်မသိပါ
Reply ↓	killer on March 2, 2013 at 12:39 pm said:
HD Game install လုပ်နည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပြောပေးပါ
Reply ↓	Tawtharlay on March 3, 2013 at 10:47 am said:
pes 2013 က play store မှာမထွက်ပဲ myanmarmobileapp မှာလာထွက်နေပါလားဗျ
Reply ↓	Gpk on March 3, 2013 at 10:50 am said:
To Download Gpk Game File.
Please visit this link —-> en.muzhiwan.com
Reply ↓	aa on March 3, 2013 at 4:31 pm said:
It said that there is no file in the mirror site. How can I download …? Please
Reply ↓	Yuzake on March 5, 2013 at 1:44 pm said:
သူမပိုင် ကိုယ်မပိုင်တဲ့ တိုင်းတစ်ပါးကနည်းပညာတွေကို တစ်ဆင့်ပြန် share နေကြတာချင်းတူတူကို ဘာလို့တစ်မှူးပိုရှုချင်ကြတာလဲ။ တစ်ကယ်ဆို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ Knowledge ရဖို့ ကူညီပေးနေကြတဲ့ website တွေချည်းပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့နည်းပညာတွေလဲရှိမယ်။ သူများ blogspot တွေကလေ့လာထားတာတွေလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ အဓိကရည်မှန်းချက်ကတော့ပြည်သူတွေအသုံးတည့်စေဖို့ပဲလေ။ ရည်ရွယ်ချက်ခြင်းတူတဲ့ group တွေတိုက်ခိုက်နေကြရင် မြန်မာလူမျိုးတွေပဲမျက်စိကန်း၊နားကန်းဖြစ်ကုန်ကြမှာပေါ့။ ဆဲလိုက်တော့ရောရင်ထဲပေါ့သွားလို့လား။ ဒီ group တွေကိုလာပြီးဖတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ငဲ့သင့်တယ်။ ဆဲတော့လဲပွဲပြီးသွားတာမှမဟုတ်တာ။ အခု Developer တွေကဘယ်နိုင်ငံအတွက်ကြိုးစားနေကြတာလဲ?
Reply ↓	alpha on March 5, 2013 at 4:31 pm said:
Reply ↓	aungmyint on March 6, 2013 at 12:46 pm said:
Reply ↓	aungmyint on March 6, 2013 at 12:47 pm said:
Reply ↓	kyaw gyi on March 6, 2013 at 2:24 pm said:
hote par tae byar.link tway ka gee nay tae byar.mediafire ka nay pyan tin pay par byoe.myanmar lo write lo ma ya lo myanglish nae write lite tae nor.hehehe
Reply ↓	nyinyisan on March 7, 2013 at 12:47 pm said:
ညီလေးတို့ရေ wifi တို့ bluetooth တို့နဲ တဖက်နဲ့တဖက်ချိတ်ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းလေးတွေတင်ပေးပါဦး
Reply ↓	nyinyisan on March 7, 2013 at 1:09 pm said:
ဒေါင်းမနေကြနဲ့တော့ဗျိုံ့ အပြင်မာ GPK ဂိမ်းခွေဝယ်ပီး ထည့်လိုက် အေးဆေးပဲ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဗျို့
Reply ↓	MC U Kyi on March 14, 2013 at 5:34 pm said:
ဒါဆိုသွင်းနည်းပြောပြပါလား?အဆင် မ ပြေလို့ခွေတော့ရှိတယ်
Reply ↓	wmm on March 15, 2013 at 2:26 pm said:
Reply ↓	ko naing on March 8, 2013 at 10:39 am said:
the amazing spider man sd data ကဘယ်လိုdownloadဆွဲရမှာလဲ
Reply ↓	konaing on March 8, 2013 at 10:41 am said:
the amazing spider man ka bal lo download swae ya mhar lae
Reply ↓	myothuoo on March 8, 2013 at 11:31 am said:
Reply ↓	wai phyo thaw on March 12, 2013 at 6:31 am said:
မရဘူး How to do?
Reply ↓	မျိုးမင်း on March 23, 2013 at 5:27 pm said:
Reply ↓	Gone Yaung Lynn on May 15, 2013 at 9:06 pm said:
A ko yay batman yae’ obb data file ka 800Mb pyit nay dal..ako pay tae’ link ka maximum k 400Mb pal ya dal. ta char link lay pay par own…
Kaung Sat on Computer( Window)ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည့်Bluestacks မှာ root ဖောက်ပြီး မြန်မာစာသွင်းနည်းKyaw Htet on iPhone/Pad/Pod touch တွေအတွက် Apple ID ဖွင့်နည်းအသစ်soelinaung on Samsung Galaxy ACE S5830: Install Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich (ICS) Custom ROMKyaw Kyaw on အာဆီယံ ၁၀ နိုင်ငံကို တစ်မိနစ် ကျပ် ၅၀ ဖြင့် ၁၅၀၀ တန်ဖုန်းအသုံးပြု၍ ခေါ်ဆိုခွင့်ရပြီWai Yan on iStunt2v1.1.2 (ready hack money)!!! Android Development